Fahanka Islaamka:Sidee Islaamku xal u noqon karaa?
Diinta Islaamka waa tii ugu danbeeysay ee Ilaah ku soo dajiyo dadka, sida Ilaah inoo cadeeyay “Maanta ayaan idiin dhameeystirnay diintiinii”[i]. Hase ahaatee; Nabiga SCW waxa uu inoo waramay “Ilaah inuu u soo saarayo umaddan qarni kasta qof u cusbooneeysiiya diinteeda”[ii] Waxaa hubaal in aqoon yahankan keeni doonin diin cusub balse uu diintii la weeciyay, khalad loo qaatay, ama laga dhacay in la fahmo, uu boorka ka jafi doono, isaga oo u laabanaya asalkii diinta oo ah quraanka, sunnaha iyo mabaadiida Islaamka ee waa weyn, ee ay isla ogolaadeen culumida ku xeeldheer garashada diinta Islaamka.
1. Ilaalinta Diinta: In la dhawro qofka diintiisa, sidoo kale xurriyadda uu u leeyahay inuu qaato diinta uu doonayo, iyada oo laga duulayo fahanka ah “Diinta khasab ma’aha xaq iyo baadilna weey kala cadaadeen”[iii] Taariikhda Islaamkana waxaad ka heleeysaa tusoolooyin badan oo muujinaya in Muslimiinta ay ahaayeen u gargaarayaasha xurriyadaha. Khawaarij oo aheyd koox ka falaagoowday Muslimiinta intooda kale, Sayyid Cali Bin-abudaalib, oo yaqiinay fahankooda guracan, goor horena gartay khatarta ay ku hayaan Islaamka, waxa uu waayay daliil u ogolaanaya inuu dagaal ku qaado, ilaa goor danbe iyaga ay weerar ku soo qaadeen Muslimiinta.
2. Ilaalinta Nafta: In la ilaaliyo nafta qofka, lana xushmeeyo waa mabda’a Islaam, Ilaah waxuu inoo sheegay inuu sharfay aadanaha[iv]. Waxeey taariikhda Islaamka sheegtay in Culimada badankood ay diideen ineey mubaayaco[v] la galaan boqortooyinkii Umawiyiinta iyo Cabaasiyiinta, waxeeyna sabab uga dhigeen boqorradaa oo baneeystay dhiigga dadka. Somaaliya waxaad arkeeysaa in naftu tahay waxa ugu raqiisan, waxaana laga yaabaa kii dadka ku laaynayay jidka inuu masjidka uga horeeyo dadka kale, maxaa yeelay fahankiisa ka fog ujeedada diinta ayaa u waramay in qofka haddii uu tukado waxa kale oo dhan iska fududaanayaan oo uu janno ku danbeyn doono, Laakiin waxuu qoraanka kariimka ah inoo sheegayaa in qofkii dila walaalkiis si ulakac ah uu ku waarayo jahanamo.
[i] Suurat al-ma’ida, Aayadda 3aad
[ii] Xadiith, Sunnan Abu da’ud
[iii] Suuradda Baqara, Aaayadda 256 aad
[iv] Suuradda Al israa, Aayadda 70 aad
[v] Heshiis wada sheqeeyn